လူမှုမီဒီယာစွဲလမ်းမှုနှင့်အီရန်အမျိုးသမီးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ရင်းနှီးမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုမှုအခန်းကဏ္ ((2019) - Your Brain On Porn
အီရန်အမျိုးသမီးများအကြားလူမှုရေးမီဒီယာစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ရငျးနှီးမှုနှငျ့လူမှုရေးထောက်ခံမှု၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍ (2019)
ပြုမူနေစွဲ။ 2019 မေလ 23: 1-8 ။ Doi: 10.1556 / 2006.8.2019.24 ။
Alimoradi Z ကို1, Lin က CY2, Imani V ကို3, Griffiths က MD4, Pakpour AH1,5.
လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားရေပန်းစားလာခဲ့ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းများအပေါ်လူမှုရေးမီဒီယာ၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းအားပေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရငျးနှီး, စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအဖြစ်၎င်းတို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်သုတေသနတစ်ခုတိုးပွားလာရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအပေါ်နောက်ခံယန္တရားအဘယ်ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒီလေ့လာမှုကနှစ်ခု Construction (ရငျးနှီးမှုနှငျ့ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှု) ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲနှင့်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများအသင်းအဖွဲ့အတွက်ပြုပြီခဲ့ကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။
တစ်ဦးကအလားအလာလေ့လာမှုဘယ်မှာအားလုံးပါဝင်သူများ (ကောက်ယူခဲ့သည်N = 938; ပျမ်းမျှအသက် = ၃၆.၅ နှစ်) သည်လူမှုရေးမီဒီယာစွဲမှုကိုအကဲဖြတ်ရန် Bergen လူမှုမီဒီယာစွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာကိုပြီးဆုံးသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသောစကေး - လိင်မှုပြressနာကိုအကဲဖြတ်ရန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော၊ ရင်းနှီးမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်တူညီသောဆက်စပ်မှုနီးကပ်မှုစကေးနှင့်အကဲဖြတ်ရန်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှရှုမြင်သည့်လူမှုထောက်ပံ့မှု ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှု။
ရလဒ်လူမှုမီဒီယာစွဲ (ရငျးနှီးမှုနှငျ့ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှုမှတဆင့်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များကဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်စုံတွဲများ၏ရင့်ကျက်မှု၊ လူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင်တစ် ဦး ချင်းအပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။
KEYWORDS: ရငျးနှီး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို; ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲ; လူမှုရေးထောက်ခံမှု
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားက ပို. ပို. ပို. လွယ်ကူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အင်တာနက်ဝင်ရောက်ဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ 2017 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.77 ဘီလီယံကိုလူတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေ (မှတဆင့်အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်Anand, Brandwood, & Jameson အီဗန်, 2017) ။ 15-24 နှစ်ပေါင်းအသက်ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၏ထိုးဖောက်မှုနှုန်းကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ 94 ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်% နှင့် 67% ဖြစ်ခန့်မှန်းထားပြီး (International Telecommunication Union, 2017) ။ မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာအဆိုအရ, (ဒီလေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ရှိရာ) ကိုအီရန်လူဦးရေရဲ့ 69.1% (2018 ရဲ့အစမှာအင်တာနက်အသုံးပြုသူခဲ့ကြသည်Internet World Stats, 2018).
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာ (တစ်ဦးချင်းစီ '' နေ့စဉ်ဘဝတွေကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်Masthi, Pruthvi, & Phaneendra, 2018) ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာထိုးဖောက်မှု၏အတိုင်းအတာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ 2017 ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်သုံးစွဲသူ 71% (လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအခဲ့ကြသည်Statista, 2018) ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူအရေအတွက်မှာ (1 ဘီလီယံ 2010 မှ 2.46 အတွက်ထက်နည်း 2017 ဘီလီယံရှိရာမှတိုးမြှင့်ထားပါတယ်Pakpour, Yekaninejad, Pallich, & Burri, 2015) ။ ထို့အပွငျ, လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က (3 ကျော် 2021 ဘီလီယံအထိလူများကိုရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်Statista, 2018) ။ အီရန်ခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40 သန်းတစ်ဦးချင်းစီရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်အပေါ် 135% တိုးကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့တက်ကြွလူမှုရေးမီဒီယာသုံးစွဲသူများဖြစ်ကြသည်။ အီရန်နိုင်ငံမှာဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်း (တရုတ်, အိန္ဒိယနှင့်အင်ဒိုနီးရှားပြီးနောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာစတုတ္ထအများဆုံးဘဏ္ဍာရေး Tribune, 2018) ။ တဦးတည်းစာရင်းဇယားက်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရအီရန်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူ 64.86% (2018 အတွက် Facebook ပေါ်မှာတက်ကြွခဲ့ကြများအနက် 2018).
အင်တာနက်စွဲ (အိုဝါ) မရှိသလောက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းဂိမ်းများနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်အဖြစ်အင်တာနက်က-based မီဒီယာမှတဆင့်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်ခံရ (အသုံးပြုသူတစ်ဦးအသေးလူနည်းစုအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်Griffiths က, 2017) ။ လူမှုကွန်ယက်၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကို "နည်းပညာစွဲ" ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံသည်နှင့်အစမ်းသဘောစတင်ပု၏နောက်ဆုံး (ပဉ္စမ) စာစောင်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သောအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်တူညီရှိပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် နောက်ထပ်သုတေသန (လိုအပ်တယ်တဲ့ရောဂါအဖြစ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုအစည်းအရုံး [ယား] 2013) ။ ဤအခြေအနေများ (salience, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေး, ပဋိပက္ခနှင့် relapse အပါအဝင်စွဲအလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်ဖို့စောဒကတက်ခဲ့ကြသူ Turel, & Bechara, 2017) ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲလမ်းမှုသည်လူမှုရေးမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အလွန်အမင်းအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုများ၊ ပညာရေးနှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အပါအ ၀ င်အခြားအရေးကြီးသောဘဝကဏ္areasများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတိုင်းအတာအထိထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်း၏ (ဆိုလိုသည်မှာလက်တွေ့ချို့ယွင်း; Dong & Potenza, 2014) ။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးမီဒီယာစွဲအဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာစှဲ (အနုတ်လက္ခဏာနှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်Griffiths က, 2000) ။ အဆိုပါအလွန်အကျွံအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတစ်ဦးချင်းစီ '' လူမှုရေးစက်ဝိုင်း၏အရွယ်အစားအတွက်လျော့ချရေးအဖြစ်အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ (တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုလင်း et al ။ , 2018) ။ Yao အဘိဓါန်များနှင့် Zhong အားဖြင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို (2014) တစ်ဦးအလားအလာလေ့လာမှုကို အသုံးပြု. အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအင်တာနက်အလွန်အကျွံနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အသုံးပြုမှုကို (အသက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအထီးကျန်၏အသိတိုးပွားလာကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်: 18-36 နှစ်) ။ စိတ်ကျရောဂါ် IA နဲ့အပြုသဘောနှင့် bidirectional ဖျန်ဖြေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းထိုသို့သောဆကျဆံရေးလက်ဝါးကပ်တိုင်-ကြံ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီရင်ခံမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူတို့ကမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအွန်လိုင်းလူမှုဆက်ဆံရေးအထီးကျန်လျှော့ချအတွက်အော့ဖ်လိုင်း interaction ကတစ်ခုထိရောက်သောအစားထိုးမဟုတ်ကြကြောင်းသိရသည်။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုနှင့်အင်တာနက်-based မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်. တဦးချင်းစီအားဖြင့်ကြုံတွေ့ပြဿနာများအောက်ပါအမြင်များကနေပိုပြီးဂရုတစိုက်လေ့လာရပါမည်: (က) တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီအာကာသကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုနှင့် (ခ) မည်မျှအချိန်တစ်ဦးချင်းစီ (အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ဖြုန်းWhitty, 2008) ။ အင်တာနက်ကို-related လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်တွေအများကြီးဖြုန်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဘဝများစွာကိုရှုထောင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ် (Dong & Potenza, 2014) ။ ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအိုဝါနှင့် / သို့မဟုတ် Internet-related လှုပ်ရှားမှုများ (ကလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ၎င်းတစ်ဦးချင်းစီကကျန်းမာရေးဒေသများ၏တဦးတည်းကြောင်းပြသကြFelmlee, 2001; Whitty, 2008; Zheng & Zheng, 2014) ။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကတိုးတကျခဲ့သကဲ့သို့, (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်Cooper & Griffin-Shelley, 2002) ။ "လိင်" နှင့်ဆက်စပ်သောစကားများဤပြောဆိုချက်ကိုဘို့သက်သေအထောက်အထား (အဖြစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အသုံးပြုထိပ်အသုံးအနှုန်းများများမှာGoodson, McCormick, & အီဗန်, 2001) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများထိုကဲ့သို့သော (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ဝယ်ယူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားဝိုင်း, ကိုရယူသုံးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်း, ဘာရှိခြင်းအဖြစ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုကြင်နာရည်ညွှန်းCooper & Griffin-Shelley, 2002) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအသုံးပြုမှု (အိမ်ထောင်ဖက်အကြားကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍကိုကစားနိုင်ပါတယ်Olmstead, Negash, Pasley, & Fincham, 2013) ။ Bridges နှင့် Morokoff အားဖြင့်လိင်ကွဲစုံတွဲ၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ (2011), နမူနာအတွက် 48.4 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 64.5% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကို၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ lovemaking ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ပြ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာနေတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအပြုသဘောအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးနိုင်ပေမယ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကို၏အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု disorders နှင့် / သို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ် (Daneback, Ross, & Månsson, 2006) ။ Aydın, Saris နှင့်Şahin (နေဖြင့်လေ့လာရေး2018) နှင့် Eichenberg, Huss နှင့်Küsel (2017) ကျဘာမှစွဲစုံတွဲများ '' ခွဲခြာနှင့်ကွာရှင်းရန်ပံ့ပိုးအချက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘာအသုံးပြုသူများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအဘို့မိမိတို့အလိုဆန္ဒအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ Muusses, Kerkhof နှင့် Finkenauer (2015) ဇနီးယောင်္ကျားဆက်ဆံရေး၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အရည်အသွေးများအသုံးပြုမှုများအကြားရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်နှင့်ခင်ပွန်း၏အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးညှိနှိုင်းမှုများအသုံးပြုမှုများအကြားတစ်ဦးအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြန်အလှန်အသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလာမည့်နှစ်တွင်ခင်ပွန်း၏အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ကျဆင်းမှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြားဖွငျ့အှနျလိုငျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု (ရသောမိတ်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတိုင်းအတာအပေါ်မူတည်ဖာလက်သည်, 2008) ။ relationship ညှိနှိုင်းမှုလူ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး (၏အရည်အသွေးကလွှမ်းမိုးထားတဲ့လူနှစ်ဦးအကြားတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်Sinha & Mukerjee, 1990) ။ Interpersonal interaction ကဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု၏အရေးအပါဆုံးခန့်မှန်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ လိင်ဆက်ဆံရေးကို (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနေခြင်းလည်းမရှိသည့်အခါနှစ်ဖက်စလုံးမသာမှုအတွက်ကျေနပ်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအကြားချိတ်ဆက်မှုရောဘတ် & ဒါဝိဒ်, 2016) ။ ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု, သဘောတူညီချက်, ကွက်တိဝင်နှင့်စိတ်ခံစားမှု၏စကားရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏အရည်အသွေးထိခိုက်စေသည်ဟုအဆောက်အဦများ (များမှာMuusses et al ။ , 2015) ။ ဒါကြောင့်အတူနှစ်လိုဖွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးနှင့်မကျေနပ်မှုတည်ထောင်ရန်ပျက်ကွက်နေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအတွက်လျော့ချရေး, အသက်ရှင်ခြင်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စွဲနှင့်မလှူ, အထီးကျန်ဆန်, အနတ္တ, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစ (မိဘတာဝန်များထမ်းဆောင်အတွက်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်Barzoki, Seyedroghani, & Azadarmaki, 2013; Heiman et al ။ , 2011; McNulty, Wenner, & Fisher, 2016) ။ Schmiedeberg နှင့်Schröder (2016) ပဋိပက္ခစတိုင်များမိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုထိခိုကျနိုငျသော်လည်းဆက်ဆံရေး၏အရှည်သည်ဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းများနှင့်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စမတ်ဖုန်းများ၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းအားပေးခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကိုကွဲပြားခြားနားသော application များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကို install နှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များ (Hertlein, 2012; Luo & Tuney, 2015), ထိုကဲ့သို့သောရငျးနှီး, စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းတို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာများ၏အသုံးပြုမှုကို၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်သုတေသနတစ်ခုတိုးပွားလာရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ အလားအလာလေ့လာမှုများ variable တွေကိုနှင့်အွန်လိုင်းလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကြားဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးများအကြားယင်းကဲ့သို့ဆက်ဆံရေး၏အရေးပါမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအကြားပိုမိုအားကောင်းကြားဆက်ဆံရေးတငျပွနိုငျကတည်းက, ဒီလေ့လာမှုလိင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပါအဝင်စုံတွဲများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစုံတွဲများ၏ရငျးနှီး။
ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနသြဂုတ်လ 2017 နှင့်အောက်တိုဘာလ 2018 အကြား Qazvin ၏အီရန်မွို့၌လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံရရှိမြို့ပြကျန်းမာရေးစင်တာများရည်ညွှန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလားအလာလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အီရန်မှာကျန်းမာရေးစနစ်ကွန်ယက်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤကွန်ယက်အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်တတိယအဆင့်ဆေးရုံများဖို့အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုစင်တာကနေစတင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းမှုစနစ်ပါဝင်သည်။ Qazvin ၏မြို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှု, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ကိုရွှေ့ဆိုင်, ကလေးကြီးထွားစောင့်ကြည့်ရေး, ကာကွယ်ဆေးနှင့်သားဖွားစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်စောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်ကြောင်း 12 မြို့ပြကျန်းမာရေးစင်တာများရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမြို့ပြကျန်းမာရေးစင်တာများဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ Qazvin တက္ကသိုလ်မှတွဲဖက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မိသားစုကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများသည်ဤစင်တာများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။
ပါဝင်သူအမျိုးသမီးများသည်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ၆ လအတွင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းနှင့်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်လိုစိတ်ရှိခြင်းတို့အပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များမှာ (က) နာတာရှည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုများ (ဥပမာ - ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ) သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများရှိခြင်း (ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ရောက်စေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ - စိတ်ရောဂါဆေးများနှင့်သွေးပေါင်ချိန်သည့်ဆေးဝါးများ) နှင့် (ဂ) ကိုယ်ဝန်နှင့်နို့တိုက်နေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ။ ဤစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး ၉၃၈ ဦး သည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာလေ့လာမှု variable တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲ, အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, ရငျးနှီးမှုနှငျ့ဆကျဆံရေးကရငျးနှီးမှု, လူမှုရေးထောက်ခံမှု, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အသက်, ထိုမိနျးမ၏ပညာရေးအဆင့်နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းအလုပ်အကိုင်အခြေအနေ, လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ကြာချိန်, တစ်လလျှင်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ကြိမ်နှုန်း, ကိုယ်ဝန်သမိုင်း, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း, အမျိုးသမီးရဲ့မွေးဖွား status ကိုအပါအဝင်လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှစွဲလမ်း BSMAS (အဘာဂန်လူမှုမီဒီယာစွဲစကေးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်; Andreassen et al ။ , 2016) ။ အဆိုပါ BSMAS (5 နေ 1-အမှတ် Likert စကေးခြောက်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်အလွန်ခဲ) (5 မှမကြာခဏ) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပconflictိပက္ခနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ BSMAS အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များကဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ၁၉ မှတ်အထက်ရမှတ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်းနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည် (Bányai et al ။ , 2017) ။ အဆိုပါစကေးအတည်ပြုထားသောတရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ (နဲ့အတူဖာစီသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်Lin, Broström, Nilsen, Griffiths, & Pakpour, 2017) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက် BSMAS ၏ Cronbach ရဲ့α .84 ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို အဆိုပါအမျိုးသမီးလိင်ရာထူးအမည်ညွှန်းကိန်း (FSFI သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်; Lin, Burri, Fridlund, & Pakpour, 2017; Lin, Oveisi, Burri, & Pakpour, 2017; ရို et al ။ , 2000) ။ ဒါဟာ (အလိုဆန္ဒ (19 မေးခွန်းများကို), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ (2 မေးခွန်းများကို), ချောဆီအရည်ကြည် (4 မေးခွန်းများကို), orgasm (4 မေးခွန်းများကို), စိတ်ကျေနပ်မှု (3 မေးခွန်းများကို) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုအပါအဝင်ခြောက်ဦးလွတ်လပ်သောဒေသများ, ပါဝင်သော3မေးခွန်းများကိုသုံးပြီးအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်3မေးခွန်းများကို) ။ အဆိုပါ FSFI ၏ဖာစီ version ကို၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများကျေနပ်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည် (Fakhri, Pakpour, Burri, Morshedi, & Zeidi, 2012) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက် FSFI ၏ Cronbach ရဲ့α .87 ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ Revised (FSDS-R) - အဆိုပါအမျိုးသမီးလိင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစကေးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးရှုထောင့်ဆနျးစစျကွောငျးကို 13 ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Self-အစီရင်ခံစာစကေးဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးမေးခွန်းများကို (5 နေ 0-အမှတ် Likert ရမှတ်များဘယ်တော့မှ) (4 မှအမြဲ) ။ လိင်ဒုက္ခဆင်းရဲပို, ရမှတ်မြင့်မား။ အဆိုပါခြုံငုံရမှတ်အသီးအသီးမေးခှနျးကရမှတ် (များ၏ summation ဖြင့်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ်DeRogatis, Clayton, Lewis-D'Agostino, Wunderlich, & Fu, 2008) ။ ယင်း၏ဖာစီဗားရှင်းတရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ (အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်Azimi Nekoo et al ။ , 2014) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက် FSDS-R Cronbach ရဲ့α .81 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမှု အဆိုပါ Unidimensional ဆက်ဆံရေးနီးကပ်စကေး (URCS) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ URCS တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေး (ထဲမှာရငျးနှီးမှု၏ဘွဲ့အကဲဖြတ်ရန်ကြောင်း 12 ပစ္စည်းများပါဝင်သော Self-အစီရင်ခံစာစကေးဖြစ်ပါသည်Dibble, Levine, & Park, 2012) ။ ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ (ကောလိပ်ချိန်းတွေ့စုံတွဲများ, အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့သူစိမ်း, သူငယ်ချင်းနှင့်မိသားစုဝင်များ) အတွက် URCS စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုကသင့်လျော်တဲ့တရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ (ရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့Dibble et al ။ , 2012) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ URCS နိုင်ငံတကာစံနှုန်းဘာသာပြန်ချက်လမ်းညွှန်ချက်များ (အရသိရသည်ဖာစီသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်Pakpour, Zeidi, Yekaninejad, & Burri, 2014) ။ တစ်ဦး 0.91-ရက်သတ္တပတ်ကြားကာလနှင့် Cronbach ရဲ့αကိန်း .2 ဖြစ်ခဲ့သည်အတွင်းထို့ကြောင့်အဆိုပါဖာစီ URCS ၏စမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရ 88 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် URCS ၏ unidimensional ဖွဲ့စည်းပုံကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
လူမှုထောက်ခံမှု ; ခံစားလူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (MSPSS ၏ Multidimensional စကေးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988) ။ ဒါဟာစကေး (တန်း 12 နေ 5-အမှတ်စကေးအပေါ် 1 ပစ္စည်းများရှိပါတယ်လုံးဝသဘောမတူ) (5 မှလုံးဝသဘောတူ) ။ နိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်အသီးသီး 12 နှင့် 60 ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဖာစီ MSPSS ၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ (Salimi, Joukar နှင့် Nikpour ကစိစစ်ခဲ့သည်2009) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက် MSPSS ၏ Cronbach ရဲ့α .93 ဖြစ်ခဲ့သည်။
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ ဆေးရုံတော့ပူပန်ခြင်းနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်စကေး (HADS သုံးပြီးအကဲဖြတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, Zigmond & Snaith, 1983) ။ ဒါဟာစကေး 14 ထံမှ4တစ် 0-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာနှစ်ခု subscales အတွက်3မေးခွန်းများကိုပါဝင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ subscale အပေါ်အများဆုံးရမှတ် 21 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ subscale အပေါ် 11 အထက်ရမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းညွှန်ပြ, 8-10 ၏ရမှတ်များနယ်စပ်ဒေသကိစ္စများတွင်ကိုယ်စားပြုခြင်း, 0-7 ၏ရမှတ်များပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ အဆိုပါဖာစီ HADS ၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ Montazeri, Vahdaninia, Ebrahimi နှင့် Jarvandi (ကအတည်ပြုခဲ့သည်2003) နှင့်လင်းနှင့် Pakpour (2017) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက် HADS ၏ Cronbach ရဲ့α .90 ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက multistage စပျစ်သီးပြွတ်ကျပန်း-နမူနာနည်းလမ်းကိုအသုံးချခဲ့သည်။ အများဆုံးအပြောင်းအလဲနှင့်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးမတူကွဲပြားအောင်မြင်ရန်ရန်, သုတေသနအဖွဲ့သည် Qazvin မွို့၌ရှိသမျှသောမြို့ပြကျန်းမာရေးစင်တာများဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ။ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးနောက်သုတေသီများအရည်အချင်းပြည့်မီသင်တန်းသားများကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တရာဖိုင်တွေကျပန်းတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပါဝင်စံများအတွက်ရွေးချယ်ပြခဲ့ကြသည်။ ပါဝင် / ဖယ်စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူများသည်အမျိုးသမီးများသည်မြို့ပြကျန်းမာရေးစင်တာများအတွက် session တစ်ခုအတွက်အခြေခံမှာလေ့လာမှုတိုင်းတာဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကိုထို့နောက်6လကာလအတွက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ခြောက်လအကြာ, တူညီတဲ့အမြိုးသမီးမြားဒုတိယအကွိမျများအတွက်လိင်ကိစ္စ function ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအကြေးခွံဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာနည်းလမ်းများ [စံသွေဖည် (အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်SD)] နှင့်အမျိုးအစားဒေတာနံပါတ်များနှင့်ကြိမ်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းသုံးပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အခြေခံနှင့်နောက်ဆက်တွဲအစီအမံများအပါအဝင်လေ့လာမှု variable တွေကိုအကြား bivariate ဆက်ဆံရေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်သုညအမိန့်ဆက်စပ်မှုကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို bootstrapping နည်းလမ်းများ သုံး၍ ရင့်ကျက်သောလူမှုရေးထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးရင်းနှီးမှုတို့မှဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းပုံစံ (၂) ခုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (ဥပမာ - Model A သည် FSFI ကိုရလဒ်အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ Model B - FSDS-R ကိုရလဒ်အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုသည်) ။ ပုံစံတစ်ခုစီတွင်အောက်ပါဆက်နွယ်မှုများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည် - (က) FSFI သို့မဟုတ် FSDS-R အပေါ် BSMAS အကျိုးသက်ရောက်မှု (ပုံရှိလမ်းကြောင်း“ ဂ”) 1), (ခ) ဖျန်ဖြေသူများအပေါ် BSMAS အကျိုးသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာရူပလူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်ဆက်ဆံရေးရငျးနှီးမှု၊1"နှင့်" တဲ့2"ပုံထဲမှာ 1) နှင့် (iii) FSFI သို့မဟုတ် FSDS-R ကို (လမ်းခရီး "ခရက်နေ့တွင်အာမခံသက်ရောက်မှု (ရိပ်မိလူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာရငျးနှီးမှု)1"နှင့်" ခ2"ပုံထဲမှာ 1) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Krull နှင့် MacKinnon ကနေသုံးခြေလှမ်းအကြံပြုချက်များ (1999) အပြွတ်အချက်အလက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသက်, ခင်ပွန်းရဲ့ပညာရေး, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, FSFI နှင့် FSDS-R ကိုအခြေခံမှာ & Models A နှင့် B တွင်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအချိန်ညှိခဲ့ကြ
ပုံ 1 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်လူမှုမီဒီယာစွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဆိုပြုထားပြုပြီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ကိုရိပ်မိလူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာရငျးနှီးမှုနှင့်အတူတွေးဆဖျန်ဖြေမော်ဒယ်များ။ BSMAS: ဘာဂန်လူမှုမီဒီယာစွဲစကေး; FSFI: အမျိုးသမီးလိင်ရာထူးအမည်ညွှန်းကိန်း; FSDS-R: အမျိုးသမီးလိင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစကေး - Revised
SPSS အတွက် PROCESS နိုင်တဲ့ macro (ဟေးယက်, 2013; မော်ဒယ် 4) မျိုးစုံဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ 10,000 ပွား၏တစ်ဦးက bootstrap လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဟာသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့နှင့်အရှိန်မြှယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI) တွင်သုည၏မရှိခြင်းကမကထပြုခဲ့သက်ရောက်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းα = .24 မှာအဓိပ်ပာယျအဆငျ့အစုံနှင့်အတူ SPSS ဗားရှင်း 05 (IBM က, Armonk, နယူးယော့, USA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသုတေသနအဆိုပြုချက်ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏ Qazvin တက္ကသိုလ်ဇီဝဗေဒသုတေသနများအတွက်ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နမူနာအဘို့အခွင့်ပြုချက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းမပြုမီ, လေ့လာမှု၏ဖော်ပြချက်, ဒေတာ၏လုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ, အမည်ဝှက်, လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လွတ်လပ်မှု, နှင့်လေ့လာမှုကနေဆုတ်ခွာအပါအဝင်အားလုံးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားစဉ်းစားနဲ့ရှင်းပြခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စာဖြင့်ရေးသားအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ပုံစံအားလုံးပါဝင်သူများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တန်းသားများကို (n = 938) ပျမ်းမျှအသက် 36.5 နှစ်ရှိခဲ့ပါတယ် (SD = 6.8) ။ ပျမ်းမျှပညာသင်နှစ်သည်သင်တန်းသားများအတွက် ၁၁.၇ နှစ်နှင့် ၁၂၂.၂၄ နှစ်သည်သူတို့၏ခင်ပွန်းများဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကာလသည် ၉.၇ နှစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကထက်ဝက်ကျော်ဟာအိမ်ရှင်မတွေဖြစ်ကြပြီး ၈၈% ကတော့ premenopausal အသက်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အနက် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကိုယ် ၀ န်ရှိသည်။
တစ်ဦးချင်းစီစကေးအပေါ်ယုတ်ရမှတ်အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏: လူမှုမီဒီယာစွဲ = 15.6 (30 ထဲက), ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ပံ့မှု (53.2 ထဲက) = 60, ရငျးနှီး = 4.9 (7 ထဲက), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို = 27.7 (95 ထဲက) , စိုးရိမ်ပူပန် = 7.7 (21 ထဲက), စိတ်ကျရောဂါ = 6.2 (21 ထဲက), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ = 7.4 (52 ထဲက) ။ တစ်ဦး6လကာလပြီးနောက်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများယုတ်ရမှတ်များအနည်းငယ်တိုးလာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်သောယုတ်ရမှတ်အနည်းငယ်လျော့သွားသည်။ စားပှဲ 1 အဆိုပါအသက်အပိုင်းအခြားကိုပြသကိုဆိုလိုသည်နှင့် SDယင်းအခြေခံမှာ6လအကြာ s ကို။
စားပွဲတင် 1 ။ သင်တန်းသားများကို '' ဝိသေသလက္ခဏာများ (N = ၂၀938)
ဝိသေသလက္ခဏာများ n (%) သို့မဟုတ် M (SD)
အသက်အရွယ် (နှစ်) 36.5 (6.8)
ပညာရေး၏အနှစ် 11.7 (4.8)
နှစ်ပညာအရည်အချင်း (ခင်ပွန်း) 12.24 (5.9)
အိမ်ထောင်သက်တမ်း (နှစ်) 9.7 (6.4)
Coital ကြိမ်နှုန်း (တစ်လလျှင်) 5.2 (3.9)
လက်ရှိဆေးလိပ်သောက်သူ 137 (14.6%)
အလုပ်လက်မဲ့သော 677 (55.3%)
အလုပ် 261 (23.0%)
ကြောငျးသား 158 (16.8%)
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ 113 (12.0%)
BMI (ကီလိုဂရမ် / မီတာ2) 22.9 (6.2)
လူမှုမီဒီယာစွဲ 15.6 (5.8)
ရူပဗေဒအထောက်အပံ့ 53.2 (10.7)
ဆက်ဆံရေးရငျးနှီး 4.9 (0.9)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှု 27.7 (4.6)
စိုးရိမ်ခြင်း 7.7 (4.9)
စီးပွားပျက်ကပ် 6.2 (4.8)
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ 7.4 (3.7)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှု 27.0 (4.9)
စိုးရိမ်ခြင်း 7.9 (4.7)
စီးပွားပျက်ကပ် 6.4 (4.5)
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ 7.3 (3.4)
မှတ်စု။ SD က: စံသွေဖည်; BMI: ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း။
စားပှဲ2အခြေခံမှာ FSDS-R ကို (MSPSS, BSMAS, FSFI အကြားသုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုတင်ဆက် (အခြေခံမှာ-up, နောက်ကိုလိုက်), စိုးရိမ်ပူပန် (အခြေခံမှာ-up, နောက်ကိုလိုက်), စိတ်ကျရောဂါ (အခြေခံမှာ-up, နောက်ကိုလိုက်) နှင့်)-up, နောက်ကိုလိုက်နှင့် URCS ။ ရလဒ် FSFI6လအတွင်းမှာအပြုသဘော MSPSS နှင့် URCS ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဆိုးစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်6လအတွင်းမှာစိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစွဲဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးမီဒီယာစွဲ, ကြားဆက်ဆံရေးရငျးနှီးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများအတွက် zero-အလို့ငှာဆက်စပ်မှု
BSMASa FSFIa စိုးရိမ်ခြင်းa စီးပွားပျက်ကပ်a FSDS-R ကိုa URCSa FSFIb စိုးရိမ်ခြင်းb စီးပွားပျက်ကပ်b FSDS-R ကိုb
စိုးရိမ်ခြင်းa - - - 0.51 0.48 -0.38 -0.41 0.55 0.50 0.48
စီးပွားပျက်ကပ်a - - - - 0.49 -0.21 -0.48 0.44 0.56 0.69
FSDS-R ကိုa - - - - - -0.26 -0.49 0.50 0.44 0.54
စိုးရိမ်ခြင်းb - - - - - - - - 0.40 0.37
စီးပွားပျက်ကပ်b - - - - - - - - - 0.35
မှတ်စု။ MSPSS: ခံစားလူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ Multidimensional စကေး; BSMAS: ဘာဂန်လူမှုမီဒီယာစွဲစကေး; FSFI: အမျိုးသမီးလိင်ရာထူးအမည်ညွှန်းကိန်း; FSDS-R: အမျိုးသမီးလိင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစကေး - Revised; URCS: Unidimensional ဆက်ဆံရေးနီးကပ်စကေး။ အားလုံး p တန်ဖိုးများ <.01 ။
a6 လအတွင်းမှာအကဲဖြတ်။ bအခြေခံမှာအကဲဖြတ်။
အဆိုပါဒီဂရီလူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုရိပ်မိရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာရငျးနှီးလူမှုရေး medial စွဲအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ (မော်ဒယ်တစ်ဦးက) / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ (မော်ဒယ်ခ) စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ 10,000 ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ bootstrapped နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးရလဒ် (FSFI အပေါ်လူမှုမီဒီယာစွဲ၏စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြB = -0.93, p <.001)၊ URCS နှင့် MSPSS တို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲလမ်းမှုနှင့် FSFI အကြားဆက်နွယ်မှု၏ ၃၁.၃% ကိုရှင်းပြသည်။ URCS မှတစ်ဆင့် FSFI အပေါ်ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲခြင်း၏သွယ်ဝိုက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ B = -0.16, SE = 0.05, 95% CI = [-0.29, -0.09] ။ MSPSS မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိသည်။ B = -0.11, SE = 0.03, 95% CI = [-0.19, -0.06] (ဇယား 3; မော်ဒယ်တစ်ဦး) ။
စားပွဲတင်3။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ရိပ်မိလူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာရငျးနှီးမှု၏ပြုပြီနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအပေါ်အမျိုးသမီးလူမှုမီဒီယာစွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမော်ဒယ်များ
မြှောက်ဖော်ကိန်း SE t p
မော်ဒယ်အေရလဒ် variable ကို: FSFI
FSFI အပေါ် BSMAS ၏စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု -0.93 0.14 6.83 <.001
BSMAS ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် FSFI သို့ကမကထပြုခဲ့သည့်ပုံစံတွင်
ဖျန်ဖြေအပေါ် BSMAS ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုa
MSPSS -0.25 0.06 -4.37 .003
FSFI အပေါ် BSMAS ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု -0.67 0.14 -4.77 <.001
FSFI အပေါ် BSMAS ၏သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု အကျိုး boot အရှေ့တောင် boot LLCI boot ULCI
စုစုပေါင်း -0.27 0.07 -0.44 -.16
URCS -0.16 0.05 -0.29 -.09
MSPSS -0.11 0.03 -0.19 -.06
မော်ဒယ်ခရလဒ် variable ကို: FSDS-R ကို
FSDS-R ကိုအပေါ် BSMAS ၏စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု 1.23 0.15 7.94 <.001
mediated မော်ဒယ်အတွက် FSDS-R ကိုအပေါ် BSMAS ၏ဆိုးကျိုးများ
FSDS-R အပေါ် BSMAS ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု 0.58 0.14 4.17 <.001
FSDS-R အပေါ် BSMAS ၏သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု အကျိုး ဘွတ်ဖိနပ် SE boot LLCI boot ULCI
စုစုပေါင်း 0.65 0.16 0.43 1.01
မှတ်စု။ အသက်, ခင်ပွန်းရဲ့ပညာရေး, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, FSFI နှင့် FSDS-R ၏အခြေခံတန်ဖိုးများ & Models A နှင့် B တွင် MSPSS နှစ်ခုလုံးအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်: ခံစားလူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ Multidimensional စကေး; BSMAS: ဘာဂန်လူမှုမီဒီယာစွဲစကေး; FSFI: အမျိုးသမီးလိင်ရာထူးအမည်ညွှန်းကိန်း; FSDS-R: အမျိုးသမီးလိင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစကေး - Revised; URCS: Unidimensional ဆက်ဆံရေးနီးကပ်စကေး; ဘိနပ် SE: စံအမှား bootstrapping; boot LLCI: ယုံကြည်မှုကြားကာလ၏အနိမ့်ကန့်သတ် bootstrapping; boot ULCI: ယုံကြည်မှုကြားကာလ၏အဲဒီနေရာက Application အထက်န့်သတ်ချက်။
မော်ဒယ် B က (စားပွဲတင်အတွက် 3), FSDS-R ကိုအပေါ်လူမှုမီဒီယာစွဲ၏စုစုပေါင်းသွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (စကစာရင်းအင်းသိသာခဲ့သည်B = 1.23, p <.001)၊ URCS နှင့် MSPSS တို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲလမ်းမှုနှင့် FSDS-R တို့အကြားဆက်နွယ်မှု၏ ၄၅.၆% ကိုရှင်းပြသည်။ တိကျသောသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ URCS (B = 0.38, SE = 0.10, 95% CI = 0.24, 0.62) နှင့် MSPSS (B = 0.26, SE = 0.08, 95% CI = 0.15, 0.46) ဆိုရှယ်မီဒီယာစွဲနှင့် FSDS-R ကိုအကြားသိသာထင်ရှားသောဖျန်ဖြေခဲ့ကြသည်။
လူမှုမီဒီယာစွဲလမ်းမှုသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၆ လတာကာလကြာရှည်သည့်ကာလရှည်လေ့လာမှုကို အသုံးပြု၍ အိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးတွင်လူမှုရေးနှင့်လူထုထောက်ခံမှုအခန်းကဏ္roleကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ McNulty et al ။ (2016) 207 စုံတွဲများတစ် longitudinal လေ့လာမှုအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ပထမဦးဆုံး 4-5 နှစ်အတွင်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, စုံတွဲများအတွက်အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၏ကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းသွားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မတ်ေတာ, အိမ်ထောင်ရေးပဋိပက္ခများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု၏ခံစားချက်များကိုအမြိုးသမီးမြားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, (အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်Pakpour et al ။ , 2015).
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအမြိုးသမီးမြားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေသည်ဟုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (များမှာBurri, Rahman, & Spector, 2011; Johannes et al ။ , 2009; ဂျွန်ဆင်, Phelps, & Cottler, 2004; Serati et al ။ , 2010) ။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအမျိုးသမီးလိင်မစွမ်းဆောင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အတူအွန်လိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဒီလေ့လာမှုအတွက်အနိမ့်အမျိုးသမီးလိင်မစွမ်းဆောင်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်အခြားအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများ၏သက်ရောက်မှုအပေါ်ယခင်သုတေသနသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ Zheng နှင့် Zheng (2014တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်ဆက်ဆံမှုအရည်အသွေးသည်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုခန့်မှန်းသူတစ် ဦး မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူတို့ကအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်လိင်အပြုအမူမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရရှိရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ သဘောထားနှင့်အပြုအမူများသည်အွန်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ Muusses et al မှအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်အသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (2015) ။ သူတို့ကယောက်ျားအားဖြင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compatibility နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူသိသိသာသာများနှင့်ပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအပြုသဘောအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးနိုင်ပေမယ့် (Bridges & Morokoff, 2011), Eichenberg et al ။ (2017) နှင့်Aydın et al ။ (2018) သည်ဆိုက်ဘာစပေ့တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (စိတ်သဘောထား, arousal, အော်ဂဇင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုအတွက်နှောင့်အယှက်ကြောင့်ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ယား, 2013), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဆုံးရှုံးမှုအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်လူမှုမီဒီယာများအသုံးပြုခြင်း၏ဤလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ၏ရလဒ်များသက်ရောက်မှုပေမယ့်, ဒီလေ့လာမှုနှင့်ယခင်လေ့လာမှုများအကြားခြားနားချက်လူမှုမီဒီယာစွဲသေချာပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဝင်ခဲ့ပါသောဤလေ့လာမှုအတွက်စူးစမ်းခဲ့သည်။ ဤအမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးသုံးစွဲခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့လူ့ဆက်ဆံရေး (ဖွံ့ဖြိုးခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ, အင်တာနက်များ၏တိုးပွားလာလက်လှမ်းမမီ, ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အွန်လိုင်း-based မီဒီယာမှသာ၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သောကြသည်မဟုတ်ပေးထား, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြတယ်Whitty, 2008) ။ အင်တာနက်ကို-based လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ဖြုန်းတစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝများစွာကိုရှုထောင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ် (Dong & Potenza, 2014) ။ McDaniel နှင့် Coyne (2016) ထိုသို့သောနည်းပညာအသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေးအတွင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ပြုပြီအဖြစ်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပိုများသောအထူးသ, ဒီလေ့လာမှုလူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်ရငျးနှီးလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (31.1%) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ (45.6%) အကြားဆက်ဆံရေး၏ကှဲလှဲတဲ့သိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းအဘို့မှတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလူမှုမီဒီယာစွဲတိုက်ရိုက်အမျိုးသမီးလိင်မစွမ်းဆောင်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့ဒါပေမယ့်လည်းသွယ်ဝိုက်စုံတွဲများနှင့်ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှုအကြားနွေးထွေးမှု၏ပမာဏ၏လျှော့ချရေးမှတဆင့်သာကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကန့်အသတ်အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများ၏မိတ်ဖက်မှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အထီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုရည်မှတ်ဒေတာစုဆောင်းမခံခဲ့ရပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးသည်နှစ်နိုင်ငံနှင့်မိန်းမကိုနှင့်သူ၏အဖော်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ထိခိုက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်အထီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေဆိုတဲ့အချက်ကိုပေးထားသော, စုံတွဲများနှင့် dyads အပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအကြံပြုကြသည်။ ဒါဟာ Self-အစီရင်ခံစာအချက်အလက်များ၏သဘောသဘာဝ (ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်လူမှုရေးလိုလားကဲ့သို့) လူသိများတဲ့ဘက်လိုက်မှုမှဘာသာရပ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကလူမှုမီဒီယာစွဲအဆိုးအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍမှအာရုံစူးစိုက်မှုနွေးထွေးမှုတိုးတက်အောင်နှင့်စုံတွဲများထောက်ပံ့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုများ၏အခြေအနေတွင်တစ်ဦးချင်းအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်စဉ်းစားရပါမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လူမှုရေးမီဒီယာကသူတို့အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အပြုအမူတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့အမူအကျင့်ကြားဝင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်သောအမြိုးသမီးမြားနှငျ့ပတျသကျသောကုသမှုအစီအစဉ်တွင်ဖြေရှင်းရပါမည်။
ZA နှင့် AHP လေ့လာမှုဒီဇိုင်းနှင့် protocol ကိုရေးသားခဲ့သည်။ VI ကိုနှင့် AHP ဒေတာစုဆောင်းနှင့်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ MDG နှင့် C-YL တည်းဖြတ်ရေး, အနက်နှင့်တည်းဖြတ်မူလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများမှလှူဒါန်းခဲ့နှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏နောက်ဆုံး version ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
MDG ဟာဘာဂန်လူမှုမီဒီယာစွဲစကေး (BSMAS) ၏မူရင်းဗားရှင်း၏ Co-developer ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးစာရေးဆရာများဤစာတမ်း၏ဘာသာရပ်မှသက်ဆိုင်ရာအဘယ်သူမျှမငွေရေးကြေးရေးသို့မဟုတ်အခြားဆက်ဆံရေးဟာသတင်းပို့ပါ။
American Psychiatric Association ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (5th ed ။ ) ။ Arlington, VA သို့: American Psychiatric Association ။ Crossref, Google Scholar
Anand, အေ, Brandwood, အိပ်ချ်ဂျေ, & Jameson အီဗန်, အမ် (2017) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လူနာများပါ ၀ င်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း - online peer support ကွန်ယက်မှအလားအလာရှိသောလျှောက်လွှာများကိုလေ့လာခြင်း။ လက်တွေ့ကုထုံး, 39 (11), 2181-2188 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2017.10.004 Crossref, Medline, Google Scholar
Andreassen, C. အက်စ်, Billieux, ဂျေ, Griffiths က, အမ်,, Kuss, D. ဂျေ, Demetrovics, Z. , Mazzoni, အီး, & Pallesen, အက်စ် (2016) ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစွဲလမ်းစေသောအသုံးပြုမှုနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှု - ကျယ်ပြန့်သောအပိုင်းအခြားလေ့လာမှု။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 30 (2), 252-262 ၏စိတ်ပညာ။ Doi:https://doi.org/10.1037/adb0000160 Crossref, Medline, Google Scholar
Aydın, B. , Sarı, S. V. , & inahin, M. (2018) ။ ကွာရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်လူမှုကွန်ယက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ပညာ၏ Universal ဂျာနယ်,6(1), 1-8 ။ Doi:https://doi.org/10.13189/ujp.2018.060101 Crossref, Google Scholar
Azimi Nekoo, အီး, Burri, အေ, Ashrafti, အက်ဖ်, Fridlund, ခ, Koenig, အိပ်ချ်ဂျီ, Derogatis, အယ်လ် R. , & Pakpour, အေအိပ်ချ် (2014) ။ အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်မှုအတိုင်းအတာ - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအီရန်၏မူကွဲ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်, 11 (4), 995-1004 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/jsm.12449 Crossref, Medline, Google Scholar
Bányai, အက်ဖ်, Zsila, Á။ , Király, O. , Maraz, အေ, Elekes, Z. , Griffiths က, အမ်,, Andreassen, C. အက်စ်, & Demetrovics, Z. (2017) ။ ပြနာရှိသည့်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်း - တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောဆယ်ကျော်သက်နမူနာမှရလဒ်များ။ PLoS တစ်ခုမှာ, 12 (1), e0169839 ။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839 Crossref, Medline, Google Scholar
Barzoki, အမ်အိပ်ချ်, Seyedroghani, N. , & Azadarmaki, T. (2013) ။ လက်ထပ်အီရန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နမူနာအတွက်လိင်မကျေနပ်မှု။ လိင် & ယဉ်ကျေးမှု, 17 (2), 244-259 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s12119-012-9149-y Crossref, Google Scholar
တံတားများ, အေဂျေ, & Morokoff, P. ဂျေ (2011) ။ လိင်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ကွဲစုံတွဲများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး, 18 (4), 562-585 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2010.01328.x Crossref, Google Scholar
Burri, အေ, Rahman, ဆိုးကျိုး, & Spector, တီ (2011) ။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်စပ်မှုများအတွက်မျိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များ။ စိတ်ပညာဆေးပညာ, 41 (11), 2435-2445 ။ Doi:https://doi.org/10.1017/S0033291711000493 Crossref, Medline, Google Scholar
Cooper က, အေ, & Griffin-Shelley, အီး (2002) ။ နိဒါန်း။ အင်တာနက် - နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး။ နယူးယောက်, NY: Brunner-Routledge ။ Google Scholar
Daneback, K. , Ross, အမ်ဒဗလျူ, & Månsson, S.-A. (2006) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုသုံးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှု၏လက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများ။ လိင်စွဲ & compulsivity, 13 (1), 53-67 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160500529276 Crossref, Google Scholar
DeRogatis, အယ်လ်, Clayton, အေ, Lewis က -D'Agostino, D. , Wunderlich, G. အ, & Fu, Y. (2008) ။ hypoactive လိင်အလိုဆန္ဒရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုအကဲဖြတ်ဘို့အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခစကေး - ပြန်လည်၏ Validation ကို။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်,5(2), 357-364 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00672.x Crossref, Medline, Google Scholar
Dibble, ဂျေအယ်လ်, Levine, T. R. , & ပန်းခြံ, အိပ်ချ်အက်စ် (2012) ။ Unidimensional Relationship Closeness Scale (URCS) - ဆက်နွယ်မှုအသစ်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်, 24 (3), 565-572 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/a0026265 Crossref, Medline, Google Scholar
Dong, G. အ, & Potenza, အမ် N. (2014) ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၏သိမြင်မှု - အပြုအမူပုံစံ - သီအိုရီအခြေခံနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်, 58, 7-11 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.07.005 Crossref, Medline, Google Scholar
Eichenberg, C တို့, Huss, ဂျေ, & Küsel, C. (2017) ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းမှသည်အွန်လိုင်းကွာရှင်းခြင်းအထိ - ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်ပုံဖော်ထားသောစုံတွဲနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုခြုံငုံသုံးသပ်သည်။ ခေတ်ပြိုင်မိသားစုကုထုံး, 39 (4), 249-260 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10591-017-9434-x Crossref, Google Scholar
Fakhri, အေ, Pakpour, အေအိပ်ချ်, Burri, အေ, Morshedi, အိပ်ချ်, & Zeidi, ဗြဲအမ် (2012) ။ အမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း - အီရန်ဘာသာပြန်ကျမ်းနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်,9(2), 514-523 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02553.x Crossref, Medline, Google Scholar
Felmlee, D. အိပ်ချ် (2001) ။ အဘယ်သူမျှမစုံတွဲတစ်ကျွန်းကျွန်း: dyadic တည်ငြိမ်မှုအပေါ်တစ် ဦး ကလူမှုကွန်ယက်ရှုထောင့်။ လူမှုအင်အားစုများ, 79 (4), 1259-1287 ။ Doi:https://doi.org/10.1353/sof.2001.0039 Crossref, Google Scholar
ဘဏ္ဍာရေး Tribune ။ (2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 6) ။ အီရန်အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာ: ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုဘဏ္ဍာရေး Tribune အတွက်ဒီရေ။ ပထမဦးစွာအီရန်အင်္ဂလိပ်စီးပွားရေးဇုန် Daily သတင်းစာ။ ရယူရန်မတ်လ 13, 2019 မှ https://financialtribune.com/articles/sci-tech/81536/latest-data-on-iran-surge-in-social-media-use Google Scholar
Goodson, P. , McCormick,,, & အီဗန်, အေ (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း - ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားများကိုလေ့လာခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 30 (2), 101-118 ။ Doi:https://doi.org/10.1023/A:1002724116437 Crossref, Medline, Google Scholar
Griffiths က, အမ် D. (2000) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - အလေးအနက်ထားရမည့်အချိန်လား။ စွဲသုတေသန, 8 (5), 413-418 ။ Doi:https://doi.org/10.3109/16066350009005587 Crossref, Google Scholar
Griffiths က, အမ် D. (2017) ။ ထင်မြင်ချက် - အင်တာနက်ရှာဖွေမှုအပေါ်မှီခိုမှုအားတိုင်းတာရန်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသောမေးခွန်းပုံစံကိုပြုစုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏ Frontiers, 5, 95. doi:https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00095 Crossref, Medline, Google Scholar
ဟေးယက်, အေအက်ဖ် (2013) ။ ဖြန်ဖြေခြင်း၊ ဖြည့်ညှင်းခြင်းနှင့်ခြွင်းချက်ဖြစ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်နိဒါန်း - ဆုတ်ယုတ်မှုကိုအခြေခံသည့်ချဉ်းကပ်မှု။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ ။ Google Scholar
သူ, ဆိုးကျိုး, Turel, O. , & Bechara, အေ (2017) ။ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် (SNS) စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲခြင်း။ သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ,7(1), 45064. Doi:https://doi.org/10.1038/srep45064 Crossref, Medline, Google Scholar
Heiman, ဂျေ R. , Long က, ဂျေအက်စ်, စမစ်, အက်စ် N. , Fisher, ဒဗလျူအေ, သဲ, အမ်အက်စ်, & ရို, R. C. (2011) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အလယ်အလတ်ဘဝအသက်တာ၌ဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှုနှင့်ငါးနိုင်ငံမှသက်ကြီးရွယ်အိုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 40 (4), 741-753 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-010-9703-3 Crossref, Medline, Google Scholar
Hertlein, K. အမ် (2012) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နေအိမ်: စုံတွဲနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးအတွက်နည်းပညာ။ မိသားစုဆက်ဆံရေး, 61 (3), 374-387 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00702.x Crossref, Google Scholar
International Telecommunication Union ။ (2017) ။ အိုင်စီတီအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ 2017 ။ ရယူရန်မတ်လ 13, 2019 မှ https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf Google Scholar
အင်တာနက်ကကမ္ဘာ့ဖလား Stats ကတော့။ (2018) ။ အီရန်ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု, ဘရော့ဘန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအစီရင်ခံစာများ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးအစီရင်ခံစာများ။ ရယူရန်မတ်လ 13, 2019 မှ https://www.internetworldstats.com/me/ir.htm Google Scholar
Johannes, C. ခ, Clayton, အေအိပ်ချ်, Odom, D. အမ်, Rosen, R. C. , Russo, P. အေ, Shifren, ဂျေအယ်လ် & Monz, ခ U. (2009) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ - စိတ်ကျရောဂါအတွက်စာရင်းပြုစုပြီးနောက်ပျံ့နှံ့ခြင်း လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျာနယ်, 70 (12), 1698-1706 ။ Doi:https://doi.org/10.4088/JCP.09m05390gry Crossref, Medline, Google Scholar
ဂျွန်ဆင်, အက်စ် D. , Phelps, L. L. , & Cottler, အယ်လ်ခ (2004) ။ အသိုင်းအဝိုင်း epidemiological နမူနာအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု၏အသင်းအဖွဲ့။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 33 (1), 55-63 ။ Doi:https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000007462.97961.5a Crossref, Medline, Google Scholar
Krull, ဂျေအယ်လ်, & Mackinnon, P. P. (1999) ။ အုပ်စုလိုက်အခြေပြုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများအတွက်အဆင့်ဆင့်ဖျန်ဖြေခြင်းမော်ဒယ်လ်။ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း, 23 (4), 418-444 ။ Doi:https://doi.org/10.1177/0193841X9902300404 Crossref, Medline, Google Scholar
လင်း, C.-Y. , Broström, အေ, Nilsen, P. , Griffiths က, အမ် D. , & Pakpour, အေအိပ်ချ် (2017a) ။ ဂန္ထဝင်စမ်းသပ်မှုသီအိုရီနှင့် Rasch မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု၍ ပါးဘာဂန်လူမှုမီဒီယာစွဲစကေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,6(4), 620-629 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.071 လင့်ခ်, Google Scholar
လင်း, C.-Y. , Burri, အေ, Fridlund, ခ, & Pakpour, အေအိပ်ချ် (2017b) ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါရှိသူများ၏ဘ ၀ အရည်အသွေးအပေါ်အမျိုးသမီး၏လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကဖျန်ဖြေပေးသည်။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ & အပြုအမူ, 67, 60-65 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.12.012 Crossref, Medline, Google Scholar
လင်း, C.-Y. , Ganji, အမ်, Pontes, အိပ်ချ်အမ်, Imani, V. , Broström, အေ, Griffiths က, အမ်,, & Pakpour, အေအိပ်ချ် (2018) ။ မြီးကောင်ပေါက်များအကြားပါရှန်းအင်တာနက် Disorder စကေး၏ Psychometric အကဲဖြတ်။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,7(3), 665-675 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.88 လင့်ခ်, Google Scholar
လင်း, C.-Y. , Oveisi, အက်စ်, Burri, အေ, & Pakpour, အေအိပ်ချ် (2017c) ။ Self-stigma နှင့်ရိပ်မိသောအတားအဆီးများအပါအဝင်စီစဉ်ထားသောအပြုအမူများသီအိုရီသည်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါခံစားနေရသောအီရန်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများအတွက်အကူအညီရှာဖွေခြင်းအပြုအမူကိုရှင်းပြသည်။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ & အပြုအမူ, 68, 123-128 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.01.010 Crossref, Medline, Google Scholar
လင်း, C.-Y. , & Pakpour, အေအိပ်ချ် (2017) ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအပေါ်ဆေးရုံစိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါစကေး (HADS) ကိုအသုံးပြုခြင်း: အတည်ပြုချက်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Rasch မော်ဒယ်များ။ ဖမ်းဆီးရမိ, 45, 42-46 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.11.019 Crossref, Medline, Google Scholar
Luo က, အက်စ်, & Tuney, အက်စ် (2015) ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုချစ်ဖို့စာပို့တာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ - ကောင်းမွန်သောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 49, 670-678 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.035 Crossref, Google Scholar
Masthi, N. R. , Pruthvi, အက်စ်, & Phaneendra, အမ် (2018) ။ မြို့ပြဘင်္ဂလားမြို့ရှိတက္ကသိုလ်အကြိုကောလိပ်များတွင်ပညာသင်ကြားနေသောကျောင်းသားများအကြားလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်။ အဝန်းဆေးပညာ၏အိန္ဒိယဂျာနယ်, 43 (3), 180-184 ။ Doi:https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM_285_17 Medline, Google Scholar
McDaniel, ခတီ, & Coyne, အက်စ်အမ် (2016) ။ “ Technoference” - ဇနီးမောင်နှံဆက်ဆံရေးနှင့်နည်းပညာ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဆက်နွယ်သောသုခချမ်းသာအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ လူကြိုက်များမီဒီယာယဉ်ကျေးမှု,5(1), 85-98 ၏စိတ်ပညာ။ Doi:https://doi.org/10.1037/ppm0000065 Crossref, Google Scholar
McNulty, ဂျေကေ, Wenner, C. အေ, & Fisher, တီ D. (2016) ။ ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု, လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏ကြိမ်နှုန်းအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 45 ​​(1), 85-97 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0444-6 Crossref, Medline, Google Scholar
Montazeri, အေ, Vahdaninia, အမ်, Ebrahimi, အမ်, & Jarvandi, အက်စ် (2003) ။ အဆိုပါဆေးရုံစိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါစကေး (HADS): အီရန်ဘာသာပြန်ကျမ်း၏ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုလေ့လာမှု။ ကျန်းမာရေးနှင့်အရည်အသွေးတို့၏ဘဝရလဒ်များ၊ ၁ (၁)၊ ၁၄ ။https://doi.org/10.1186/1477-7525-1-14 Crossref, Medline, Google Scholar
Muusses, အယ်လ် D. , Kerkhof, P. , & Finkenauer, C. (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေး - လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကြားညှိနှိုင်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏မိတ်ဖက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကြားကာလကြာရှည်စွာလေ့လာခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 45, 77-84 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.077 Crossref, Google Scholar
Olmstead, အက်စ်ခ, Negash, အက်စ်, Pasley, K. , & Fincham, အက်ဖ် D. (2013) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အနာဂတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်အသစ်များကတိသစ္စာပြုထားသည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ - အရည်အသွေးလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 42 (4), 625-635 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-012-9986-7 Crossref, Medline, Google Scholar
Pakpour, အေအိပ်ချ်, Yekaninejad, အမ်အက်စ်, Pallich, G. အ, & Burri, အေ (2015) ။ အီရန်နိုင်ငံမှသွေးဆုံးကာလအတွင်းအမျိုးသမီးများ၏နမူနာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကာလတိုကွာခြားမှုကိုစုံစမ်းရန်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာခဏအကဲဖြတ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း။ PLoS တစ်ခုမှာ, 10 (2), e0117299 ။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117299 Crossref, Medline, Google Scholar
Pakpour, အေအိပ်ချ်, Zeidi, ဗြဲအမ်, Yekaninejad, အမ်အက်စ်, & Burri, အေ (2014) ။ ဘာသာပြန်ပြီးယဉ်ကျေးမှုအရအဆင်ပြေသောအီရန်နိူင်ငံဆိုင်ရာ Erectile Function ၏ဗားရှင်းကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 40 (6), 541-551 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.788110 Crossref, Medline, Google Scholar
ဖာလက်သည်, O. (2008) ။ မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားမှုအကြားစပ်လျဉ်း: အဘယျသို့အသက်တာ၏သင်တန်းကျော်လက်ထပ်ကလူကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်သနည်း မိသားစုကုထုံး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 36 (5), 388-401 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/01926180701804634 Crossref, Google Scholar
ရောဘတ်, ဂျေအေ, & ဒါဝိဒ်, အမ်အီး (2016) ။ ငါ့ဘဝသည်လက်ကိုင်ဖုန်းမှအဓိကအာရုံပျံ့လွင့်စရာဖြစ်လာသည် - မိတ်ဖက် phubbing နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းမိတ်ဖက်များအကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 54, 134-141 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058 Crossref, Google Scholar
ရို, R. , ဘရောင်း, C တို့, Heiman, ဂျေ, Leiblum, အက်စ်, Meston, C တို့, Shabsigh, R. , ဖာဂူဆန်, D. , & D'Agostino, R. , Jr. (2000) ။ အမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း (FSFI) - အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်ကိရိယာ။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 26 (2), 191-208 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/009262300278597 Crossref, Medline, Google Scholar
Salimi, အေ, Joukar, ခ, & Nikpour, R. (2009) ။ အင်တာနက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး - လူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်အထီးကျန်မှုကိုရှေးယခင်ကိန်းရှင်များအဖြစ်ယူမှတ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာရေး,5(3), 81-102 ။ Google Scholar
Schmiedeberg, C တို့, & Schroder, ဂျေ (2016) ။ လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကျေနပ်မှုကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအရပြောင်းလဲသွားပါသလား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 45 ​​(1), 99-107 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-015-0587-0 Crossref, Medline, Google Scholar
Serati, အမ်, Salvatore, အက်စ်, Siesto, G. အ, Cattoni, အီး, Zanirato, အမ်, Khullar, V. , Cromi, အေ, Ghezzi, အက်ဖ်, & Bolis, P. (2010) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်,7(8), 2782-2790 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01893.x Crossref, Medline, Google Scholar
Sinha, အက်စ်, & Mukerjee, N. (1990) ။ အိမ်ထောင်ရေးညှိနှိုင်းမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသတိမ်းညွတ်။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 130 (5), 633-639 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224545.1990.9922955 Crossref, Google Scholar
များအနက်။ (2018) ။ အီရန်အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာလူမှုမီဒီယာ stats ။ ရယူရန်မတ်လ 13, 2019 မှ http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/iran Google Scholar
Statista ။ (2018) ။ (ဘီလီယံအတွက်) 2010 ထံမှ 2021 မှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူအရေအတွက်။ ရယူရန်မတ်လ 13, 2019 မှ https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/ Google Scholar
Whitty, အမ်တီ (2008) ။ လွတ်မြောက်လား၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 24 (5), 1837-1850 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.02.009 Crossref, Google Scholar
Yao, M. Z. , & Zhong, Z.-J. (2014) ။ အထီးကျန်ခြင်း၊ လူမှုရေးအဆက်အသွယ်များနှင့်အင်တာနက်စွဲခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 30, 164-170 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.08.007 Crossref, Google Scholar
Zheng, အယ်လ်, & Zheng, Y. (2014) ။ တရုတ်ပြည်မကြီးရှိအွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုအားရှာဖွေခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 36, 323-329 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.062 Crossref, Google Scholar
Zigmond, အေအက်စ်, & Snaith, R. P. (1983) ။ အဆိုပါဆေးရုံစိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါစကေး။ Acta စိတ်ရောဂါ Scandinavica, 67 (6), 361-370 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x Crossref, Medline, Google Scholar
Zimet, G. အ,, Dahlem, N. ဒဗလျူ, Zimet, အက်စ်ဂျီ, & Farley, G. အ K. (1988) ။ ရိပ်မိလူမှုထောက်ပံ့မှု၏ Multidimensional စကေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 52 (1), 30-41 ။ Doi:https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2 Crossref, Google Scholar